Sheekh Axmed Qasim Al-Ghamdi oo sheegay inaanu xaaran aheyn in loo dabaal dego maalinta Jacaylka | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Sheekh Axmed Qasim Al-Ghamdi oo sheegay inaanu xaaran aheyn in loo dabaal dego maalinta Jacaylka
Sheekh Axmed Qasim Al-Ghamdi oo kasoo jeeda wadanka Sacuudiga ayaa sheegay in maalinta loo dabaal dego Jacaylka aysan ka duwanayn Maalmaha kale ee la dabaaldego, sidaas darteed aysan ahayn xaraam sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynihii hore ee gudiga horumarinta dhaqanka wanaagsan iyo Ka-hortagga akhlaaqda ama dabeecada xun ee Makkah, ayaa u sheegay wargeyska Arab News in 14-ka Febraayo oo loo dabaal dego maalinta jaceylka adduunka aysan ahayn mid u gaar ah dadka aan Muslimiinta ahayn isla markaana ay tahay dhacdo bulsheed oo ay muslimiintu xitaa u dabaal degi karaan.
“Maalinta Jacaylka ee Valentine’s Day maaha mid ka soo horjeeda diinta Islaamka maadaama ay tahay arrimo bulshadeed sida xusuusta Maalinta Qaranka iyo Maalinta Hooyada,” ayuu yiri.
“Dhammaan kuwan waa arrimo bulshadeed oo caadi ah oo ay wadaagaan bini’aadamka oo aysan ahayn arrimo diimeed oo u baahan in la helo caddayn diimeed si loo oggolaado,” ayuu Sheekh Axmed Qasim Al-Ghamdi hadalka kusoo gabagabeeyay.
HALKAN KA AQRI WARKA SHEEHA